कलियुगका कुरा: भन्ने निषेधित गर्ने चाहिँ खुलमखुल्ला
मैले फेरफारका लागि हालेका दुइ जोर कपडा फरक फरक प्लास्टिक झोलामै पोको पारेको थिएँ। सूचना पढेपछि एक मनले लाग्यो, अब प्लास्टिक झोलाबाट कपडा झिक्न पर्यो र ल्यापटपको चार्जर, दाँत माझ्ने बुरुस, किताब र डायरीसँगै कपडालाई पनि मिसाउन पर्यो। फेरि अर्को मनले भन्यो, यहाँबाट लैजाउँ के रे जोमसोम विमानस्थलबाट प्लास्टिक लान नपाइने रहेछ भने प्लास्टिक झोला त्यही छाडुँला।
बिहान समयमै उडान भयो र करिब २० मिनेट जति हावामा तैरिएको जहाज जोमसोम विमानस्थलमा उत्रियो। झोला कुनै एक्स रे मेसिनमा पनि घुसार्न परेन र कसैले खोल्दा पनि खोलेन, त्यसको जाँच परिक्षण केही भएन। सोचें प्लास्टिकमै रहने भए कपडा कम्तिमा मन्जन अँचेटिएर फुटेमा कपडा भरी लाइहाल्ने भएन।
एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किएको त प्लास्टिक प्रतिवन्ध भनेको मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा जम्मै सामान प्लास्टिकमै पो बेच्न राख्यारहेछन्।
के को प्लास्टिक प्रतिवन्ध हुनु ? भदौदेखि मंसिर सम्म जानेहरुले जोमसोमबाट कोशेलीको रुपमा ल्याउने स्याउ त जम्मै प्लास्टिक झोलामा राखेर यात्रुहरुलाई बेचिंदो रहेछ। स्याउँ सँगै त्यहाँको च्याउ होस् कि मकै, सिंबी होस् कि लसुन वा स्याउको सुकुटी नै सबै प्लास्टिक झोला मै पोको पारेर व्यापार गरिँदो रहेछ।
कुनै पनि विषयमा निर्णय र घोषणा गर्नु अगाडि हामीकहाँ त्यो घोषणा कतिको व्यवाहारिक छ/ छैन भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम सायदै हुन्छ होला। जे कुरा पनि घोषणा गर्दिने सरकार अनि आफ्नै हितका लागि, हाम्रै समाज राम्रोका लागि र वातावरण जोगाउनका लागि फाइदै पुर्याउने भए पनि सरकारी घोषणालाई सकेसम्म पालना नगर्न पाए, विजयी महसुस गर्ने हामी, अनि के को प्लास्टिक प्रतिवन्धको पालना हुन्थ्यो र ?
जोमसोम मात्र होइन पोखरामा पनि प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको छ। पोहोर वैशाखदेखि पोखरालाई प्लास्टिक मुक्त पार्ने अभियान सुरु भएको हो र पोहोर साउन १ गते देखि नै कसलै प्रयोग गर्न नपाउने घोषणा गरेको हो। तर प्लास्टिकका झोला जताततै पाइन्छ पोखरामा पनि।
काठमाडौंमा पनि कहिले २० माइक्रोन भन्दा कमको प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्न नपाउने त कहिले कालो रङको प्लास्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिवन्ध लगाइएको छ। तर अहिलेसम्म पनि कालै पातला प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा छन्। प्रतिवन्ध घोषणा गरेपनि कार्यान्यवन नभएपछि सरकारले गत साउनदेखि न्युनतम मापदण्ड बाहिरका प्लास्टिक झोला प्रयोग गरे ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नेसम्मको कुरा प्रकाशमा आयो तर अहिलेसम्म न त प्लास्टिक झोलाको प्रयोग कम भएको देख्छु न त जरिवाना तिरेको तिराएको नै काठमाडौं वा अन्य कतै सुन्न पाइएको छ।
यो कार्यान्वयन हुँदै नहुने घोषणा किन गर्नु कुन्नि। जन भलाई कै लागि घोषणा गरेको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन किन नगर्नु कुन्नि। नेपालमा पञ्यातकालमा नै केही जिल्लालाई मदिरा निषेधित घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै जिल्ला मध्येको एक अछाममा काम गर्ने मेरा आफन्तले भन्नुहुन्थ्यो - यो प्रतिवन्धको घोषणाले अलिकति भाउ बढाउने भन्दा अरु केही गर्दोरहनेछ।
प्लास्टिक झोला प्रतिवन्धित भनेको छ अनि किन बिक्रि भएको सामान प्लास्टिक झोलामा नै दिने गर्नुभएको हो भन्दा हाँसेकी जोमसोमकी एक जना साहुनी।
Overlap from Pawan September 9, 2011 at 11:00 AM
खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनो भनेजस्तै